Fitsirihana nataon’ny Jirama :: Mpiasam-panjakana ambony tratra nangalatra herinaratra • AoRaha
Fitsirihana nataon’ny Jirama Mpiasam-panjakana ambony tratra nangalatra herinaratra
Manohy hatrany ny fitsirihana ireo halatra herinaratra eto an-drenivohitra sy ny manodidina ny orinasa Jirama. Mpiasam-panjakana iray, monina eny Antsobolo, indray no tra-tehaka nisintona herinaratra mivantana tamin’ ny “tableau électrique”. Nampirehitra ny kaontera tao aminy izany.
“Tsy vitan’ny efa mangalatra ho an’ny tenany ity olona ambony ity fa mbola mizara izany tamin’ny tokan­trano iray teo akaikiny ihany koa. Rehefa nanao ny fitsirihana ilay kaontera ny ekipan’ ny “Direction de l’Audit Interne” na DAI dia tsikaritra fa tsy nihodina nandritra ny enimpolo volana ny kaontera. Ilay tokantrano anefa nampiasa herinaratra foana nandritra izany”, araka ny tatitra avy ao amin’ny orinasa Jirama. Notapahina avy hatrany ny herinaratra tamin’ ity tokantrano ity.
Nilaza kosa ny tompon-trano fa mpiasan’ny Jirama ihany no nanampy azy tamin’ ity halatra herinaratra ity, tamin’ny sandany 200 000 ariary, miampy vidina fitaovana vitsivitsy. Nasaina hano­nitra ny saran’ny herinaratra nampiasainy maimaim-poana nandritra io fotoana io ity manam-pahefana ity.
Rehefa natao ny kajikajin’ireo fitaovana nampiasainy dia maherin’ny 18 tapitrisa ariary ny vola tokony hoefai­ny amin’ny Jirama. Raha toa ka mandà ny marimaritra iraisana izy dia hampiakatra ny raharaha any amin’ny Fitsarana ny orinasa Jirama.
Fanadinam-panjakana :: Niakatra ho 10/20 ny tahan’ny naoty nanivanana an’ireo afaka bakalôrea